Ogaden News Agency (ONA) – Maraykanka oo Xoojiyay Weerarada Kadhanka Ah Al-shabaab.
Maraykanka oo Xoojiyay Weerarada Kadhanka Ah Al-shabaab.
Posted by ONA Admin	/ November 22, 2017
Dowladda Mareykanka ayaa kordhisay howlgalkeeda iyo ciidamada ka jooga Soomaaliya ee dagaalka kula jira Al-Shabaab iyo sidoo kale kooxda Daacish ee ku sugan Gobollada Bari ee Soomaaliya.
Saraakiil Sar sare oo ka tirsan dowladda Maraykanka ayaa sheegay in ciidamada Maraykanka ee joogga Soomaaliya la gaadhsiiyay Meeshii ugu sareysay. Waxaa ay sidoo kale sheegeen in ciidamada dowladda Maraykanka howlgalada ay ka fuliyaan Soomaaliya in ay noqdeen kuwo badankood guulaystay.
Waxaa ay sheegtay in ku dhawaad 500 oo askari la gaadhsiiyay sanadkan Ciidamadeeda howlgallada gaarka ah ka fuliya Soomaaliya. War laga soo xigtay wasaaradda difaaca Maraykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Maraykanka uu balaadhiyay Qorshaha dagaalka lagula jiro Argagixisadda ah ee ku sugan Geeska Africa.
Dowladda Maraykanka ayaa bilihii lasoo dhaafay si weyn u xoojisay howlgallada ay ka fuliso Soomaaliya, waxaana xusid mudan in bishan ay fulisay in ka badan 5 weerar saddex ka mid ah ay dhaceen 24 saac gudahooda. Maraykanka ayaa horay u sheegay in ay ka go’an tahay dagaalka Kooxda Daacish ee ku sugan deegaanada maamulka Puntland ee Al-Shabaab.